Stainless Lock Steel Ball sies
Zikagesi Accessories Series
Wenzhou Weihang Plastic Co., Ltd. kuyinto professional benza ibhanti nenayiloni, neqhina stainless, neqhina ipleyiti iqhina, uhlobo bead, inombolo tube, nelembande, ifilim, lokuvala, isikhonkwane umboniso, mbini utshintsho igunya, namandla mbini transfer oluzenzekelayo iimveliso sivula R & D, imveliso kunye nokuthengiswa kwenye kwamashishini. Kwaye ukuba amisele ixesha elide esitalini unxulumano lwentsebenziswano kunye nenani abathengisi kunye arhente. Le nkampani iye Umatshini enkulu isitofu ambumbe, ukupakishwa oomatshini, ubugcisa bemveliso advanced, izixhobo uvavanyo, anamandla zobugcisa, iimveliso lithunyelwa eYurophu, eUnited States, kuMbindi Mpuma kunye namanye amazwe kunye nemimandla.
Le nkampani Igxininisa kakhulu kwimveliso lobushushu yokusebenza wenayiloni tape: degrees -20 Celsius to +80 amaqo C (nenayiloni 66). Kunye nophuculo oluqhubekayo umbandela uya kukwazi ukwenza wenayiloni nomtya kubushushu obuphantsi -40. Nge acid, kwealkali, nekudodobalisa idangatye, uqinile, ubushushu kunye nezinye iingenelo. Iimveliso ezisetyenziswa kakhulu mveliso lwangaphakathi elektroniki, wayibopha TV, intambo yekhompyutha, ukukhanyisa, umgca intambo iqhina, nazo zingasetyenziswa uhombiso elingaphakathi, igadi siyabophelela, inqanawa intambo lwangaphakathi nitrogen, ngebhayisekile okanye isithuthi nokupakisha wayibopha ezinye izinto nazo zingasetyenziswa ezolimo, ukulima, ngezandla kunye nezinye izinto izikhwebu. Imveliso neneempawu wokuzila esibophelelayo, ngendlela elungileyo, self lwekeyboard, kulula ukuyisebenzisa njalo-njalo. Yiba inani elikhulu kwamashishini, amashishini ukuba bathenge iimveliso efanayo yokuzikhethela, kodwa kukho inani elikhulu iivenkile ukungena eUnited States nakwamanye amazwe aphuhlileyo.
Iinkampani unamathele "kunye nehlabathi, nomthengi win-win" intanda ishishini, soloko ngqo le "ixabiso yenkampani ezisemgangathweni ophezulu, ukusebenza eziphezulu nexabiso eliphantsi" umthengi ucinga jikelele, kwaye ngamandla nokwandisa iimarike zasekhaya nezamazwe ngamazwe, iye yaseka uthungelwano yokuthengisa kunye nenkqubo inkonzo lenkonzo yomxhasi kweli lizwe, umzi, iimveliso lithunyelwa mpuma Asia, iYurophu kunye United States namanye amazwe kunye nemimandla, isabelo lorhwebo kunye izinga lokukhula iintengiso baqhubeka ukuphakama ngcembe, kundamkela entsha nendala abathengi apha ekhaya nakumazwe aphesheya ukuza kusityelela kwaye thethana ishishini, ukudala ikamva elingcono!
Lwedilesi: Yueqing City, Liushi Ao Ao Industrial Zone